२०७६ असार ३१ गते लाग्नेछ चन्द्रग्रहण , कुन राशि भएकालाई कस्तो प्रभाव पर्छ ? जानी राख्नुस
यहि महिनाको आउने असार ३१ गते खण्डग्रास चन्द्र ग्रहण लाग्नेछ । आषाढ शुक्ल पक्ष गुरु पूर्णीमाका दिन खण्डग्रास चन्द्र ग्रहण लाग्ने भएको हो । यो चन्द्र ग्रहण एशिया, युरोप, अफ्रिकी देशहरु, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका र उत्तर अमेरीका को पूर्वी भागबाट देखिनेछ । चन्द्र ग्रहण नेपाली समय अनुसार रातको १ बजेर ४६ मिनेटमा सुरु भएर राति ३ बजेर १५ मिनेटमा मध्य भै ४ बजेर ४५ मिनेट सम्म ग्रहण लाग्नेछ । हिन्दु धर्ममा आस्थावान हरुकालागि असार ३१ गते मंगलबार दिउँसो ४ बजेर ४६ मिनेट देखि सुतक लाग्ने हुनाले बाल, वृद्ध र बिमारी देखि बाहेकले भोजन नगर्नु उत्तम हुनेछ ।
धनु राशि र मकर राशिमा ग्रहण लाग्ने हुनाले यि राशि हुने व्यक्ति हरु लाई बढि कष्ट हुन सक्नेछ । समग्रमा यो ग्रहण को फल राशि अनुसार निम्न बमोजिम प्राप्त हुने देखिन्छ । मेष राशिका हरुलाई मान नाश हुने योग रहेको छ। वृष राशि रहेकालाइ कष्ट, मिथुन राशिलाइ स्त्रीपिडा, कर्कट राशिलाइ सुख, सिंह राशिलाइ चिन्ता, कन्या राशिलाइ व्यथा, तुला राशिलाइ श्रीप्राप्ती, वृश्चिक राशिलाइ क्षती, धनु राशिलाइ घात, मकर राशिलाइ व्यय, कुम्भ राशिलाइ लाभ र मिन राशि भएका हरुलाई सुख को योग छ।
ग्रहण अवधिमा दीर्घ रोगि र गर्भवति महिलाले बाहिर ननिस्कनु शुभ हुनेछ । धार्मीक मान्यता अनुसार ग्रहण अवधिमा नयाँ कार्यको थालनी नगर्नु, खानेकुरा नखानु, सुत्ने, कपाल कोर्ने, दाँत माझ्ने ईत्यादि कार्य नगर्नु उत्तम हुनेछ । ग्रहण सकिएपछि नुहाई धुवाई गरेर आफ्नो अवस्था अनुसार दान गरि आफ्नो नित्य कर्म गर्नू शुभ हुन्छ ।
विद्याकी देवी सरस्वतीको पुजा भोलि ! यसरि गर्नुहोस सरस्वती पुजा
बैसाखी टेकेरै मिडियामा गर्जिए ज्ञानेन्द्र शाही......भिडियो
१५ बर्षमै होटल चलाउने भाइहरुलाइ भाग्य न्यौपानेले दिए आर्थिक सहयोग........भिडियो हेर्नुस
Previous Article प्रकाश सपुत र अन्जली अधिकारिको अभिनयमा नया गीतको भिडियो सार्बजनिक….
Next Article युवतीलाई सुई हानेको भनिएका खगेन्द्र निर्दोष, पहिलो पटक बोले मिडियामा ( भिडियो सहित )